समाजवादको यात्रा नरोकिने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा )का नेता गजुरेलेका भनाई / समाजवादले मात्रै कान्छीमायाको सपना पुरा हुने जिकिर | PBM News.com
सन्तकुमार चौधरी /पिविएम न्यूज ।
राप्ती २ साउन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा ) का नेता हरिबोल गजुरेलले समाजवादको यात्रा नरोकिने बताउनुभएको छ । नेपाल सरकार प्रदेश नं. ३ का भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दार्जेलामाका धर्मपत्नी स्व. कान्छीमाया लामाको १३ औं दिनको पुण्यतिथीमा आयोजना गरिएको श्रद्धाञ्जली सभामा बोल्दै नेता गजुरेलले समाजवादको यात्राले मात्रै कान्छीमाया लामाको सपना पुरा हुने जिकिर गर्नुभयो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका केन्द्रीय नेता गजृुरेलले समाजवादको यात्रामा लाई टुगोमा पुर्याउन आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो । “हामी समाजवादको यात्रामा छौं ” नेता गजुरेलल भन्नुभयो – “ समाजवादको यात्रामा कतै अल्मलिनु हुँदैन । ”
दुईवटा पार्टी एकता भएपछि नेता कार्यकर्ताहरु उत्साहित बनेको भन्दै नेता गजुरेलले समाजवादको यात्रा चुनौतीपूर्ण रहेकाले पार्टी एकताको विषयमा कन्फ्युज नहुन समेत आग्रह गर्नुभयो । माओवादी र एमाले भित्रका चर्को गुटबन्दीले पार्टी विघटन तर्फ गइरहेका बेला नेतृत्वले संकटवाट दुईवटै पार्टीलाई बचाएको तर्क गर्नुभयो । “ हामी ठूलो ठाउँमा आएका छौं । ” उहाँले भन्नुभयो हामी कान्छीमायाकै सपना साकार पार्ने बाटोमै छौं ।
नेता गजुरेलले समाजवाद ल्याउने कम्प्युनिष्ट व्यवस्थाको सपना रहेको भन्दै उहाँले आफुहरु कतै नरोकिने बताउनुभयो । यो यात्रामा चुनौतीहरु धेरै रहेकाले नेतृत्वहरु थोरै दायाँबायाँ गरेको प्रष्ट पार्नुभयो ।
समाजवादको यात्रालाई असफल बनाउन दुस्मनहरुले घेरा हालेर बसेकाले नेतृत्वमा बसेकाहरुको बाध्यतालाई नेता कार्यकर्ताहरुले बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो । नेतृत्वले दायाँ बायाँ नगरेको भए कम्युनिष्टहरु यो स्थानमा आउन सक्ने थिएन उहाँले भन्नुभयो । सिधा हिड्न खोजेको भए पेरुको हालतमा हामी पुग्ने थियौं ।
कार्यक्रममा प्रदेश न.- ३ का मुख्य मन्त्री डोरमणी पौडेलले कान्छी मायाको निधनले सिंगो सरकारलाई आघात पुगेको बताउनुभयो । जन्मिएपछि मृत्यु निश्चित रहेपनि कतिपय मृत्यु अस्वभावीक हुने भएकाले पाटीका नेता कार्यकर्ता देखि प्रदेश सरकारलाई समेत पीडा पुगेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकार प्रदेश नं. ३ का भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दार्जेलामा निकै भावकु हुनुभयो । स्वर्गीय धर्मपत्नीको जीवनी सुनाउन कार्यक्रम संचालन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी चितवनका सचिव तेजेन्द्र वहादुर खड्काले आग्रह गरेपछि सहकारी मन्त्री लामा माइक समात्नुभयो । माइक समातेर संवोधन समेत गर्न सक्नुभएन । ठूलै स्वरमा रुनुभयो । उहाँको रुवाई सँगै श्रद्धाञ्जली दिन पुगेका नेता कार्यकर्ताहरुको आँखा पनि रसाएका थिए । मन्त्री दावादार्जे लामा भावुक भएपछि छोरा विश्वशान्त लामाले शोकको घडीलाई शक्तिमा बद्ल्नुपर्नेमा बताउनुभयो । मृत्यु कसैको इच्छा वा रहरले नआउने भन्दै छोराले एउटा आमा गुमाएपनि कयौं आमाहरु प्राप्त गरेकोमा यसैलाई खुशी मान्नुपर्ने बताउनुभयो । आफुहरुले आमा शब्द गुमाएको भएपनि अभिभावक विहीन नभएको बताउनुभयो । उहाँले यो शोकलाई शक्तिमा बदल्नका लागि यहाँहरुको उपस्थिती र सहयोग आफुहरुलाई काफि हुने समेत तर्क गर्नुभयो ।
कलेजोको क्यान्सरबाट पीडित पत्नी कान्छीमायाको ५८ वर्षको उमेरमा असार २१ गते विहान हेटौडामा निधन भएको थियो । लामाको बौद्ध परम्परा अनुसार चितवनको राप्ती ४ स्थित भवानीपुर गुम्बामा अन्त्येष्टि गरिएको थियो । कान्छीमायालाई क्यान्सर भएको गत मंसिरमा पत्ता लागेको थियो । परिवारले उनलाई उपचारका लागि भारतसमेत लगेको थियो । स्वर्गीय लामाका दुई छोरी र दुई छोरा छन् ।